उपकार लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन दिने अन्तिम दिन आज।
उपकार लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ।
हाल सम्म कम्पनीको आईपीओमा २२ लाख ३८ हजार ७ सय ५७ जनाले २ अर्ब ५४ करोड ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ५४ लाख ९ हजार ४ सय ४० कित्ताको लागि आवेदन दिएका हुन् । हालको अवस्था हेर्दा जम्मा ० दशमलभ ९८ प्रतिसत आवेदकले १० कित्ता शेयर हात पर्ने छन् भने ९९ दशमलभ ०२ प्रतिसत आवेदकको हात खालि हुने छ।
लघुवित्तले सर्वसाधणहरुलाई २ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६६ हजार २५० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारीपूँजी रू. ६ करोड ५६ लाख २५ हजार ३६ प्रतिशतले हुन आउने रू. २ करोड ३६ लाख २५ हजार बराबरको शेयर निष्काशन गरेको छ।
निष्कासन गरिने कुल शेयर मध्य शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार २८१ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८१३ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरिएको छ। त्यसतै बाँकी रहेको २ लाख २१ हजार १५६ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १ हजार कित्ताका लागि आज बैङ्किङ समय भित्र आवेदन दिन सक्ने छन् ।
साथै उक्त संस्थाको शेयर निष्कासन तथा बिक्रि प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैङ्किङ लिमिटेड रहेको छ । नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैङ्किङका तर्फबाट प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनी भारती र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शारदा कुमारी खत्रीले धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक तथा शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओलाई डबल बि माइनस रेटिङ दिएको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको देखाँउछ । आईपीओ जारि गर्न कम्पनीले २०७८ भदौ १३ मा सेबोनमा निवेदन पेस गरेको थियो ।
कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय बाँके जिल्लाको कोहलपुर- ११ मा रहेको छ ।